Filtrer les éléments par date : samedi, 29 juillet 2017
samedi, 29 juillet 2017 22:17
Sambava : Nitrangana fanafihana mitam-basy
Ny zoma 28 jolay tokony tamin’ny 11 ora alina no tafiditra tao an-tokantrano ireo jiolahy maromaro izay samy mitam-basy kalaky ary manao fanamiana karikary sy misarontava raha ny fijoroana vavolombelona nataon’ny voatafika.
Voatoto basy ny lohan’ilay tompontrano ary noterena mba hanoro ny misy lavanila tao an-tranony.
Lasan’ireo jiolahy ny lavanila masaka milanja 5kg niampy lamba fripy anaty gony sy vola 80.000 Ariary.
samedi, 29 juillet 2017 21:56
Ambovombe Androy : Andrasana ao anio alina ny nofo mangatsiakan’i Mgr Pierre Zevaco
Tonga ao Ambovombe Androy androany, mijanona ao ny nofo mangatsiakany anaovan’ny mpino Katolika, sy ny Kristianina ao an-toerana fiaretan-tory
Hiala maraina ary ny alahady 30 jolay 2017 tolakandro no tonga eto Tolagnaro ny razana ary hamantana avy hatrany ao amin’ny Katedraly St Vincent de Paul, hametrahana azy.
Mbola handray ny razana ihany koa anefa ny ao Amboasary Atsimo, ny alahady 30 jolay 2017. Hisy ny fotoam-pivavahana hanamarihana izany ao an-toerana .
Nindaosin’ny fahafatesana tao Fianarantsoa, teo amin’ny faha-92 taonany i Mgr Zevaco noho ny aretina nahazo azy.
Terantany frantsay teraka tany Corse tamin'ny taona 1925 i Mgr Pierre Zevaco. Ny 29 Jona 1959 izy no nohamasinina ho pretra. Tamin'ny taona 1969 izy no voahosotra ho Evekan’i Tolagnaro, izy no Eveka fahatelo tao, andraikitra nosahaniny hatramin'ny 2001 nandehanany nisotro ronono ka nifindra tao Fianarantsoa teo amin'ny Scolassticat Tanantsoa.
samedi, 29 juillet 2017 08:33
Vohémar: Alim-pandihizana niafara tamin’ny faty olona
Semban-drahona ny alim-pandihizana nataon’ny mpanankato Bemalaza raha nilalao tao Amboriala Vohémar, ny alin’ny alakamisy 27 jolay fa niady ny andian-tanora ka tovolahy iray 25 taona no namoy ny ainy vokatry ny tsatoka tavoangin-dabiera teny amin’ny vozony.
Raha ny fanamarihan’Atoa Christian, Ben’ny Tanàna lefitra ao Amboriala dia niezaka izy ireo niaraka tamin'ny Polisy Kaominaly sy ny Zandary roa, izay nalain’ny Kaominina nisahana ny fandriampahalemana nandritra ity alim-pandihizana nokarakarain’ny Kaominina ity, mba hitadiavam-bola hanamboarana Lycée Mixte ao an-toerana, saingy izao nitrangan-doza izao.
Omaly maraina ny zoma 28 jolay dia nikasa ny hamaly faty ka handeha hisambotra ny fianakavian’ireo izay namono nahafaty ity tovolahy ity ny andaniny, nandray andraikitra ny kaompanian’ny zandary Vohémar rehefa naheno ny tranga.
Tsy mbola voasambotra ireo tompon’antoka tamin’ny famonoana ity tovolahy ity.